Smart Home နည္းပညာ (သုိ.မဟုတ္) အလုိအေလ်ာက္ အိမ္ထိန္းခ်ဳပ္စနစ္ေတြဟာ
ယနေ.ခေတ်ပေါ် စမတ်ဖုန်းအများစုသည်၊ တီဗွီ၊ အဲကွန်း၊ DVD players အစရှိသည့် နေ.စဉ်သုံး လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများအား ထိန်းချုပ်နိူင်စွမ်းရှိနေပြီဖြစ်ပါသည်။ Smart Home နည်းပညာသည်၊ မိမိ လက်ထဲရှိနှင့်ပြီး စမတ်ဖုန်းဖြင့်ပင်၊ အိမ်တွင်းရှိ အခြား လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများအား မိမိကိုယ်တိုင် manual ထိန်းချုပ်ခြင်းဖြစ်စေ၊ သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်တစ်ခုတွင်ဖြစ်စေ အလိုအလျောက်အလုပ်လုပ်နေစေရန် စီမံခြင်းပင် ဖြစ်ပါတယ်။
ယနေ.ခေတ် ကမ္ဘာကျော်သူဌေးကြီးများ၏ အိမ်များတွင် တွေ.ရတတ်သော အလိုအလျောက် အိမ်တံခါးတွေဖွင့်ခြင်းပိတ်ခြင်း၊ မီးစနစ်တွေဖွင့်ခြင်းပိတ်ခြင်း စသည့် အလွန်စမတ်ကျတဲ့ အိမ်ကြီးတွေကို ရုပ်ရှင်များမှတဆင့်ဖြစ်စေ၊ အင်တာနက် သတင်းများမှတဆင့်ဖြစ်စေ မြင်ရကြည့်ရသည်မှာ အထူးအဆန်းမို. အလွန်စိတ်ဝင်စားဖို.ကောင်းလှပါတယ်။ အဆိုပါ အလိုအလျောက် စမတ်အိမ်စနစ်များတွင် လှူပ်ရှားမှူအာရုံခံ Motion sensor များ၊ စမတ်ဖုန်းများ စသည်ဖြင့် အာရုံခံစနစ်များ၊ စမတ်လျှပ်စစ်လေးများ အများအပြားပါဝင်ပြီး၊ ၎င်းတို. အချင်းချင်းအလိုအလျောက်ချိတ်ဆက်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ကြပါတယ်။ နည်းပညာတိုးတတ်လာမှူနဲ. အတူ အဆိုပါစမတ်ပစ္စည်းများသည်လည်း များစွာထုတ်လုပ်လာကြတဲ့ အတွက် ဈေးကွက်အတွင်းတွင် ဈေးနူန်းထားအမျိုးမျိုးဖြင့် လွယ်ကူစွာဝယ်ယူရရှိနိူင်နေကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီး၊ အရိုးရှင်းဆုံး နှင့် အမြန်ဆုံး စမတ်အိမ် အဖြစ်ပြောင်းလဲရန်အတွက် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း ကတော့ တပ်ဆင်ရလွယ်ကူပြီး၊ ရိုးရှင်းစွာ အသုံးပြုလို.ရတဲ့ စမတ်မီးလုံးများနှင့်စမတ်ပလပ်ပေါက်များ ဝယ်ယူအသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မိမိအိမ်အား စမတ်ဖြစ်တဲ့ အိမ်လေးတစ်အိမ်အဖြစ် မြန်မာငွေ တစ်သိန်းအောက် သာသာသုံးပြီး ကိုယ်တိုင်တပ်ဆင်အသုံးပြုနိူင်တဲ့အိမ်သုံး Smart ပစ္စည်း ၅ မျိုး အားစုစည်းတင်ပြလိုက်ပါတယ်။
Figure 8 TP link Kasa A-19 Wi-Fi LED smart bulb
TP-Link ထုတ် Kasa A-19 Wi-Fi LED စမတ်မီးလုံး
Kasa မီးလုံးတစ်လုံးတည်းပါသည့် 1 pack ဝယ်ယူမည်ဆိုလျှင် 22$ ကျသင့်မည်ဖြစ်ပြီး၊ မီးလုံး ၃ လုံးပါ3pack ကိုဝယ်ယူမည်ဆိုပါက 55$ နဲ.ဝယ်ယူနိူင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Kasa smart မီးလုံးများသည် အလင်းမှိန်ခြင်း၊ အလင်းအားမြှင့်ခြင်း စသည့်လုပ်ဆောင်ချက်တွေပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ watt 50 အားမီးလုံးဖြစ်ပြီး၊ အလင်းအား 800 lumens အထိအလင်းပြန်.နှံ.မှူရှိပါတယ်။ Smartphone များနဲ. တွဲဖက်လုပ်ဆောင် နိူင်မှာ ဖြစ်ပြီး၊ Google နှင့် Amazon တို.ရဲ့ voice Assistant တွေနဲ. တွဲဖက် အသုံး ပြုနိူင်မည် ဖြစ်သောကြောင့် မိမိ၏အသံဖြင့်ပျင် မီးဖွင့်၊ မီးပိတ်၊ မီးအလင်းရောင် ချိန်ညှိခြင်း စသည့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို ထိန်းချုပ်ခိုင်းစေနိူင်ပါတယ်။ ထူးခြားချက် အနေနဲ. Kasa smart မီးလုံးတွေဟာ Wi-Fi နဲ.အဓိကတွဲဖက်အလုပ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် အခြား Smart မီးလုံးများကဲ့သို. တဆင့်ကြားခံထိန်းချုပ်စနစ်ဖြစ်သော Hub မလိုအပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Figure9Philips Brand Hue White Starter Kit
Philips တံဆိပ္ Hue White Starter Kit စမတ် LED မီးလုံး
Philips တံဆိပ် 95$ ဒေါ်လာတန် စမတ်မီးလုံးတွေ နောက်ပိုင်းများတွင် စမတ်မီးလုံးအရေအတွက် ပိုမိုတိုးချဲ.သုံးမယ်ဆိုတဲ့ သူတွေအတွက် ပိုသင့်တော်ပါတယ်။ ဒီ Philips white starter kit ဟာ စတင်ဝယ်ယူစဉ်ကတည်းက မီးလုံးနှစ်လုံးနဲ. Smart Bridge ခေါ်တဲ့ ထိန်းချုပ်စနစ် တစ်ခု အပြည့်အစုံပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး၊ မီးလုံးနှစ်လုံးအပြင်၊ အပိုစမတ်မီးလုံးများ ထည့်သွင်းတိုးချဲ.ပြီး အသုံးပြုနိူင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ bridge လေးဟာ Amazon ရဲ. Alexa လိုမျိုး voice assistant နဲ. တွဲဖက်အသုံးပြုနိူင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် မိမိရဲ. အသံနဲ.ဖြင့်လည်း ထိန်းချုပ်ခိုင်းစေလို.ရနိူင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Figure 10 GMYLE Smart Plugs
GMYLE စမတ္ ပလပ္ေပါက္
စမတ်ပလပ်ပေါက်တွေရဲ. ထူးခြားချက်ဟာ အခြား LED စမတ်မီးလုံးတွေလို မီးတစ်မျိုးတည်းသာ ထိန်းချုပ်နိူင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲ၊ ပလပ်ပေါက်နဲ. တွဲလို.ရသမျှ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းအကုန်လုံးကို စမတ်ဖြစ်စေပြီး ထိန်းချုပ်ခိုင်းစေနိူင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ အိမ်မှာရှိနှင့်ပြီးသား ပန်ကာအဟောင်းများ၊ သက်တမ်းကြာရေခဲသေတ္တာ၊ တီဗွီ၊ အဲကွန်းများအစရှိတဲ့ မည်သည့်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းမဆို ထိန်းချုပ်အသုံးပြုနိူင်စေမှာဖြစ်တဲ့ ကိုယ့်စမတ်ဖုန်းထဲအား မိမိရဲ.တစ်အိမ်လုံး ထည့်ထားသလိုမျိုး သုံးနိူင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အဓိကပါဝင်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေအနေနဲ. စမတ်ပလပ်ပေါက်တွေကို အချိန်နဲ.သတ်မှတ်ပြီးဖြစ်စေ၊ မိမိစမတ်ဖုန်းမှတစ်ဆင့်တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ ထိန်းချုပ်ပြီးလိုအပ်သလို စီမံနိူင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Figure 11 Smart Plugs working together asagroup
စမတ်ပလပ်ပေါက်တွေအား ပုံမှန်သမရိုးကျ စမတ်မီးလုံးတွေထက် ထူးကဲသာလွန်စေတဲ့နောက်ထပ် တစ်ချက်ကတော့ စမတ်ပလပ်လေးတွေဟာ တွဲဖက်အသုံးပြုတဲ့ ပစ္စည်းတိုင်းရဲ. လျှစ်စစ်သုံးစွဲမှူနူန်းတွေကိုပါသိရှိနိူင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုတပ်ဆင်ရအလွန်လွယ်ကူပြီး ဈေးကွက်တွင်းတွင် GMYLE စမတ်ပလပ်ပေါက်တွေကို ၄၉ ဒေါ်လာဝန်းကျင်ခန်.ဖြင့် ဝယ်ယူရရှိနိူင်ပါတယ်။
Figure 12 Koogeek smart plug
GMYLE စမတ်ပလပ်ပေါက်နဲ. အခြေခံအားဖြင့် အတူတူဖြစ်ပေမဲ့ ပိုပြီးသာလွန်စေတာကတော့ Apple ရဲ. HomeKit app နဲ.ပါတွဲဖက်အလုပ်လုပ်ဆောင်နိူင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အသုံးပြုရ အဆင်ပြေစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ Google voice assistant နဲ.လည်း တွဲဖက်နိူင်မှာဖြစ်တဲ့ အတွက် မည်သည့်စမတ်ဖုန်းအမျိုးအစားနဲ.မဆို အသံအလုပ်လုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ. ထိန်းချုပ်ခိုင်းစေနိူင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ နည်းပညာမြင့် Koogeek စမတ်ပလပ်ပေါက်တွေကို 32$ နဲ. Amazon store တွင် ဝယ်ယူရရှိနိူင်ပါတယ်။
Figure 13 Koogeek smart plug’s power consumption report
Figure 14 Advance functions of Koogeek smart plug
လှူပ်ရှားမှူကို အာရုံခံပေးတဲ့ Elgato Eve စက်ဟာ၊ တခြား စမတ်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ စမတ် LED မီးလုံး၊ စမတ် ပလပ်ပေါက်တွေနဲ. တွဲဖက်အသုံးပြုနိူင်တဲ့ Motion sensor တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ မိမိအိမ်ကို စမတ်ဖြစ်တဲ့ အိမ်တစ်အိမ်အဖြစ် ပြောင်းလဲရာမှာ Motion sensor က မပါမဖြစ်လို.ဆိုရလောက်အောင် အသုံးဝင်လှတဲ့ ပစ္စည်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ လှူပ်ရှားမှူကို အာရုံခံပြီး အလုပ်လုပ်တာဖြစ်သောကြောင့် အသုံးပြုသူအနေနဲ. အခန်းတံခါးဖွင့်ပြီဆိုတာနဲ. မီးခလုတ်များ၊ အဲကွန်းများ စသည့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကို အလိုအလျောက်ပွင့်စေ/ပိတ်စေ နိူင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ စမတ်ဖုန်းဖြင့် တွဲဖက်ထားမည်ဆိုလျှင် မိမိအလုပ်မှာရှိနေစဉ် အိမ်ရဲ့လူဝင်လူထွက်အစရှိသည်များကို Motion sensor ကတဆင့် ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ စမတ်ဖုန်းအား Notification ပို.ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Smart Home နည်းပညာ (သို.မဟုတ်) အလိုအလျောက် အိမ်ထိန်းချုပ်စနစ်တွေဟာ
Figure 15 TP link Kasa A-19
Kasa မီးလုံးတစ်လုံးတည်းပါသည့် 1 pack ဝယ်ယူမည်ဆိုလျှင် 22$ ကျသင့်မည်ဖြစ်ပြီး၊ မီးလုံး ၃ လုံးပါ3pack ကိုဝယ်ယူမည်ဆိုပါက 55$ နဲ.ဝယ်ယူနိူင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Kasa smart မီးလုံးများသည် အလင်းမှိန်ခြင်း၊ အလင်းအားမြှင့်ခြင်း စသည့်လုပ်ဆောင်ချက်တွေပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ watt 50 အားမီးလုံးဖြစ်ပြီး၊ အလင်းအား 800 lumens အထိအလင်းပြန်.နှံ.မှူရှိပါတယ်။ Smart phone များနဲ. တွဲဖက်လုပ်ဆောင် နိူင်မှာ ဖြစ်ပြီး၊ Google နှင့် Amazon တို.ရဲ့ voice Assistant တွေနဲ. တွဲဖက် အသုံး ပြုနိူင်မည် ဖြစ်သောကြောင့် မိမိ၏အသံဖြင့်ပျင် မီးဖွင့်၊ မီးပိတ်၊ မီးအလင်းရောင် ချိန်ညှိခြင်း စသည့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို ထိန်းချုပ်ခိုင်းစေနိူင်ပါတယ်။ ထူးခြားချက် အနေနဲ. Kasa smart မီးလုံးတွေဟာ Wi-Fi နဲ.အဓိကတွဲဖက်အလုပ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် အခြား Smart မီးလုံးများကဲ့သို. တဆင့်ကြားခံထိန်းချုပ်စနစ်ဖြစ်သော Hub မလိုအပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Figure 16 Philips Brand Hue White Starter Kit
Philips တံဆိပ် Hue White Starter Kit စမတ် LED မီးလုံး
Figure 17 GMYLE Smart Plugs
GMYLE စမတ် ပလပ်ပေါက်
Figure 18 Smart Plugs working together asagroup
Figure 19 Koogeek smart plug
GMYLE စမတ်ပလပ်ပေါက်နဲ. အခြေခံအားဖြင့် အတူတူဖြစ်ပေမဲ့ ပိုပြီးသာလွန်စေတာကတော့ Apple ရဲ. HomeKit app နဲ.ပါတွဲဖက်အလုပ်လုပ်ဆောင်နိူင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အသုံးပြုရ အဆင်ပြေစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ Google voice assistant နဲ.လည်း တွဲဖက်နိူင်မှာဖြစ်တဲ့ အတွက် မည်သည့်စမတ်ဖုန်းအမျိုးအစားနဲ. မဆို အသံအလုပ်လုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ. ထိန်းချုပ်ခိုင်းစေနိူင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ နည်းပညာမြင့် Koogeek စမတ်ပလပ်ပေါက်တွေကို 32$ နဲ. Amazon store တွင် ဝယ်ယူရရှိနိူင်ပါတယ်။
Figure 20 Koogeek smart plug’s power consumption report
Figure 21 Advanced functions of Koogeek smart plug
လှူပ်ရှားမှူကို အာရုံခံပေးတဲ့ Elgato Eve စက်ဟာ၊ တခြား စမတ်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ စမတ် LED မီးလုံး၊ စမတ် ပလပ်ပေါက်တွေနဲ. တွဲဖက်အသုံးပြုနိူင်တဲ့ Motion sensor တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ မိမိအိမ်ကို စမတ်ဖြစ်တဲ့ အိမ်တစ်အိမ်အဖြစ် ပြောင်းလဲရာမှာ Motion sensor က မပါမဖြစ်လို.ဆိုရလောက်အောင် အသုံးဝင်လှတဲ့ ပစ္စည်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ လှူပ်ရှားမှူကို အာရုံခံပြီး အလုပ်လုပ်တာဖြစ်သောကြောင့် အသုံးပြုသူအနေနဲ. အခန်းတံခါးဖွင့်ပြီဆိုတာနဲ. မီးခလုတ်များ၊ အဲကွန်းများ စသည့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကို အလိုအလျောက်ပွင့်စေ/ပိတ်စေ နိူင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ စမတ်ဖုန်းဖြင့် တွဲဖက်ထားမည်ဆိုလျှင် မိမိအလုပ်မှာရှိနေစဉ် အိမ်ရဲ့လူဝင်လူထွက်အစရှိသည်များကို Motion sensor ကတဆင့် ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ စမတ်ဖုန်းအား Notification ပို.ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်
Why Myanmar needs More Internationally Qualified Engineers
Jobs of the Future – Networks and Information Systems Security